Ndị njem nleta America hụrụ nwụrụ anwụ na họtel Dominican Republic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ndị njem nleta America hụrụ nwụrụ anwụ na họtel Dominican Republic
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
di na nwunye-1
A hụrụ di na nwunye si America na Prince George County na Maryland ezumike na Dominican Republic nwụrụ anwụ n'ime ụlọ nkwari akụ ha. Dabere na ndị uwe ojii, ahụrụ ozu Edward Nathael Holmes (63) na Cynthis Ann Day (49) na Playa Nueva Romana na San Pedro de Macrois.
Di na nwunye ahụ rutere ụbọchị ole na ole tupu Satọdee, Mee 25, ma ga-elele na họtel ahụ na Tọzdee, Mee 30. Mgbe ha na-atụfu oge ha ga-apụ, ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ enteredụ enteredụ batara n'ime ụlọ mgbe ọ nweghị onye zara ọnụ ụzọ achọpụtabeghị ha. Ndị ọrụ ahụ gwaziri ndị ọchịchị.
Ọ bụ ezie na ahụ ha egosighi ihe ike ọ bụla, a na-ewere ọnwụ ha dị ka enyo enyo, n'ihi na Holmes mere mkpesa banyere ụfụ na Tọzdee, mana mgbe dọkịta rutere ilere ya anya, ọ jụrụ ka onye ọrụ ahụ hụ ya. Ndị ọchịchị kwuru na e nwere ọtụtụ karama ọgwụ e ji agwọ ọbara mgbali elu n’ime ụlọ di na nwunye ahụ, ma ọ nweghị ọgwụ ndị ọzọ a hụrụ.
Ndị uwe ojii kwuru na ihe kpatara ọnwụ ji kpebisie ike site na autopsies emere na Regional Institute of Forensic Sciences. Ekpebiela na di na nwunye a nwụrụ n'ihi iku ume iku ume na ede ede akpa ume. Amabeghị otú nwoke na nwanyị ahụ si nwụọ n'otu oge. Ndị isi na-echere nsonaazụ nke toxicology na nyocha histopathology.
Otu onye ọrụ gọọmentị nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị na United States kwuru, sị, “Anyị na-enye ezinụlọ ahụ ezigbo nkasi obi maka ọnwụ ha. “Anyị na ndị ọchịchị obodo nọ nso nso banyere nyocha ha na-akpata ihe kpatara ọnwụ. Anyị dị njikere inye enyemaka ndị nnọchiteanya niile kwesịrị ekwesị. Ngalaba Steeti US na ndị nnọchi anya anyị na ndị nnọchi anya mba ọzọ enweghị ibu ọrụ karịrị nchekwa nke ụmụ amaala US na mba ofesi. N'ihi nkwanye ùgwù anyị nwere n'ebe ezinụlọ anyị nọ n'oge ihe isi ike a, anyị enweghị azịza ọ bụla. ”
Hotellọ nkwari akụ ahụ kwuru na nkwupụta na "ọ na-ewute ya nke ukwuu maka ihe ahụ merenụ."
N’ụlọ nkwari akụ ọzọ na Dominican Republic, ụbọchị ise gara aga na Mee 25, nwanyị Pennsylvania, Miranda Schaup-Werner (41), onye dibịa mgbaka sitere na Allentown, Pennsylvania, onye ya na di ya nọ ezumike, nwụrụ na mberede n’ime ụlọ ya ka ọ havingụsịrị mmanya mini-ụlọ ahụ.
Akụkọ banyere ọnwụ ndị a na-abịa ụbọchị ole na ole nwanyị nwanyị Delaware kọwara otú otu nwoke wakporo ya n'ụzọ obi ọjọọ na ebe ezumike ya na Punta Cana ọnwa isii gara aga.
Mee ego lelee ụmụ amaala nso comment nkasi obi kọntaktị County di na nwunye ụbọchị nwụrụ anwụ ọnwụ ọnwụ Delaware ngalaba Ngalaba Ochie nwụrụ dọkịta Dominican Dominican Republic site ọṅụṅụ ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ihi ofesi okpu ezinụlọ anya hụrụ George ukwuu ime ụlọ nkwari akụ di ihe merenụ Institute nyocha dị nnọọ mara ọnwụ nwoke Maryland Mini ọnwa ukara isi esenidụt mgbu Pennsylvania uwe ojii mgbali -isi nchedo Punta cana njikere jụrụ mpaghara mba eme nkwanye ùgwù ibu ọrụ pụta ụlọ show ihe ịrịba ama mkpara okwu enyo ule na-emeso -ABỤ ime ihe ike nwaanyị